#GuptaLeaks: Okwathunyelwa i-CV yakhe kwabakwaGupta wagixabezwa ngesikhundla kwa-Eskom | News24
#GuptaLeaks: Okwathunyelwa i-CV yakhe kwabakwaGupta wagixabezwa ngesikhundla kwa-Eskom
amaBhungane, Daily Maverick neNews24
Johannesburg - Esikhathini esiyisonto iCV yakhe ithunyelwe kwabakwaGupta, osiza lo mndeni uSalim Essa wagixabezwa ngesikhundla esiphezulu kwa-Eskom. Ngemuva kwalokho imali ibilokhu ingena ingenile kwabakwaGupta.
Kwezinye izimpawu zokulawula kwabakwaGupta ukuthi obani abaqokwa emabhizinisini kahulumeni, ama-#GuptaLeaks akhombisa ukuthi bathunyelelwa iCV kaCollin Matjila esikhathini esincane ngaphambi kokuba aqokwe njenge-CEO yakwa-Eskom ngonyaka ka-2014. Ngemuva kokuqokwa kukaMatjila, iTNA Media yabe isigixabezwa ngezivumelwano zezimali ezishisiwe yile nkampani ephehla ugesi.
NgoMashi 22, kunyaka ka-2014, osondelene nomndeni wakwaGupta, uSalim Essa, wadlulisa iCV kaMatjila kwenye yezinsizwa zakwaGupta, uRajesh, nowaziwa kakhulu ngelikaTony, kanye nomshana wakhe, uSrikant Singhala, oyindodana ka-Atul Gupta.
Le CV yabe isidluliselwa esisebenzini senkampani yabakwaGupta, iSahara Computers kanye noDuduzane Zuma – indodana kaMengameli Jacob Zuma futhi ephinde ibe ngumlingani kwezamabhizini nabakwaGupta.
OLUNYE UDABA: #GuptaLeaks: 'AmaGupta' ahlela ukuthenga amaphephandaba amakhulu kuleli
Ngasekupheleni kwaleyo nyanga uMatjila, nowayelokhu esebhodini lakwa-Eskom kusukela ngonyaka ka-2011, wangena esikhaleni sikaBrian Dames njenge-CEO esabambile. Isikhathi esincane nje eqokiwe sayisiza kakhulu inkampani yabakwaGupta, iTNA Media, nokuyiyona eshicilela iphephandaba elaziwa kakhulu ngokweseka uhulumeni, iThe New Age.
Ngo-OKthoba 2014, amaBhungane abika ukuthi “uMatjila kusolwa ukuthi washaya indiva izeluleko zomthetho zangaphakathi wabe esegunyaza isabelomali sika-R43-million wokuxhasa izidlo zasekuseni zamabhizinisi zeNew Age”.
Lezi zidlo zasekuseni, manje esezinqanyuliwe yiSABC, zazihlale zisakazwa bukhoma kodwa izindleko zithwalwe yiSABC, bese iTNA Media yona ithathe inzuzo. Kuzo kwakuvamise ukuthi kumenywe osopolitiki abadumile, okubalwa kubo noMengameli Jacob Zuma.
Le micimbi yayivamise ukuthola ukuxhaswa ngezimali ezinkulu yizinkampani zikahulumeni, nalapho abanye bongoti bethi yikhona okwakusiza leli phephandaba elidonsa kanzima ukuthi liqhubeke nokusebenza.